I-Photoshop ye-iPad isiyatholakala Yini le nguqulo isinikeza yona? | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Aplicaciones, Tablets
Ngokwethulwa kwe I-iPadOS 13, I-Apple inikeze i-iPad i-push eyayiyidinga ukwenza le divayisi ithuluzi elifanele lokufaka i-laptop yethu yakudala nge-lighter, encane futhi ethokomele ukuphatha idivayisi. Njengoba izinyanga ziqhubeka, kancane kancane izicelo zokuthola okuningi kuzo ziyeza.
Kunabahleli bezithombe abaningana be-iPad ku-App Store, kodwa-ke, akubona bonke abasinikeza izici ezifanayo esingazithola ezinhlelweni zamakhompyutha. Ngokufika kwe-Photoshop ku-iPad, indlela yokuhlela izithombe ku-Apple iPad iba lula kakhulu. Kepha Ngabe i-Photoshop isisinikeza ini nge-iPad?
I-Photoshop yisoftware enhle kakhulu yezithombe nokwakhiwa emhlabeni, ifana neSpotify yomculo noma iNetflix yokusakaza ividiyo. Wonke umuntu uyazi izinzuzo ze-Photoshop, ngakho-ke sizokutshela okuncane noma lutho ngalolu hlelo ongazi kahle. Ngokukhishwa kwenguqulo ye-iPad, singakwazi hlela noma yisiphi isithombe noma udale noma yini efika engqondweni.
1 I-Photoshop ye-iPad, lokho ebesikade sikulindile
1.1 Dala amafayela ngefomethi ye-PSD
1.2 Ifomethi efana nenguqulo yedeskithophu
1.3 Sebenza noma yikuphi
1.4 Thumela kwamanye amafomethi
1.5 Hlela ngokushesha izithombe
1.6 Sebenza ngokubambisana ne-Apple Pencil
2 I-Photoshop Amadivayisi Ahambisanayo we-iPad
3 Imikhawulo ye-Photoshop ye-iPad
4 Itholakala kuphela ngesiNgisi (okwamanje)
5 Ibiza malini i-Photoshop ye-iPad?
I-Photoshop ye-iPad, lokho ebesikade sikulindile
Njengoba inkampani isho, le nguqulo yokuqala igxile ekwakhiweni nasekuthayweni kabusha kwamathuluzi yakhelwe ukusebenza ku-iPad ngePensela ye-Apple, ithuluzi elingabalulekile kepha elisiza kakhulu lapho usebenza nohlelo.
Dala amafayela ngefomethi ye-PSD
Ifomethi ye-PSD iyona esetshenziswe yi-Photoshop, ifomethi leyo isinikeza ukuguquguquka okungakholeki Ngokugcina konke okuqukethwe ngezendlalelo, izendlalelo esingahlela, sisuse, sihlanganise, siphinde sithinte ngokuzimela. Imisebenzi esiyidalayo ku-iPad ingabiwa nanoma iyiphi enye idivayisi esebenzisa i-Photoshop noma isihleli esihambisana nale fomethi.
Ifomethi efana nenguqulo yedeskithophu
Ukwenza kube lula ukusebenzisa le nguqulo entsha yamathebulethi, nokuthi ayikho ijika lokufunda, i-Photoshop ye-iPad isibonisa ukwakheka okufanayo esingakuthola kunguqulo yedeskithophu. Ngakwesobunxele sithola wonke amathuluzi atholakalayo nangakwesokudla kwesikrini ukuphathwa kwezendlalelo ezahlukahlukene esizidalayo.
Sebenza noma yikuphi
Wonke amafayela esiwakhile kudivayisi yethu agcinwa nge-othomathikhi efwini le-Adobe, elisivumela finyelela kuzo kunoma iyiphi enye ikhompyutha usebenzisa i-akhawunti efanayo ye-Adobe, ngakho-ke sigwema ukuthumela amafayela asindayo esiwadala ngeposi, kuzingxenyekazi zemiyalezo ...
Futhi, noma yiziphi izinguquko esizenzayo ezithombeni esikuhlelayo kugcinwa ngokuzenzekelayo efwini le-Adobe, okusivumela ukuthi siqhubeke ngokushesha ukuhlela izithombe kukhompyutha yethu uma nganoma yisiphi isizathu, inguqulo ye-iPad ayikuvumeli okwamanje.
Thumela kwamanye amafomethi
Ifomethi ye-PSD isivumela ukuthi sigcine zonke izingqimba / izinto esizifakile esithombeni esizenze ngokuzimela kepha kufayela elilodwa, esivumela ukuthi sisuse noma sihlele izingqimba noma kunini lapho sifuna khona. Lapho sethula umsebenzi wethu, idokhumende ayikaze ilethwe ngefomethi ye-PSD ukuze iguqulwe, kepha kunalokho zonke izingqimba zihlelwe zaba yodwa, njengamafomethi I-PNG, i-JPEG ne-TIFF, ifomethi esingathumela kuyo amafayela esiwakhile ngalolu hlelo lokusebenza.
Hlela ngokushesha izithombe
Susa ukukhanya okungafuneki, sebenzisa izihlungi, sebenzisa ithuluzi le-clone ukususa izinto ezingafuneki ... konke lokhu kungenzeka njengoba singenza njengamanje kunguqulo yedeskithophu, kungaba ngePensela le-Apple noma ngokusebenzisa iminwe yethu esikrinini.
Sebenza ngokubambisana ne-Apple Pencil
Njengoba ukushaya kwethu kuyinsimbi, Ukusebenza ne-Apple Pencil ku-Photoshop ye-iPad kusinikeza ukunemba esingathanda kakhulu ukuthi sisebenzise igundane, ikakhulukazi lapho sisebenzisa amabhulashi ahlukile uhlelo lokusebenza olusenza sitholakale kuwo.
Ngaphezu kwalokho, khetha ngesandla, ngokusebenzisa ithuluzi le-Lasso ukudala izingqimba ezintsha, faka imiphumela, ufihle okokufaka, wenze noma yimuphi omunye umsebenzi kushaya umoya nepensela i-Apple.
I-Photoshop Amadivayisi Ahambisanayo we-iPad
Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Photoshop ye-iPad, imfuneko yokuqala ebalulekile ukuthi idivayisi yethu iyi iphethwe yi-iPadOS, ngakho-ke wonke lawo amamodeli angazange abuyekezelwe i-iOS 13 awakwazi ukufaka uhlelo lokusebenza.
I-iPad Pro (12.9 intshi) wonke amamodeli
I-iPad Pro (10.5 intshi)
I-iPad Pro (9.7 intshi)
I-iPad 5th generation onward.
I-iPad Mini 4 kuqhubeke.
iPad Air 2 kuqhubeke.
Isizukulwane sokuqala nesesibili i-Apple Pencil. Akucacisiwe ukuthi ngabe I-Logitech Crayon, i-Apple Pencil eshibhile iyahambisana, kepha kungenzeka kakhulu ukuthi iyona.
Imikhawulo ye-Photoshop ye-iPad
Uma i-iPad yethu indala, eminye yemisebenzi esinikezwa uhlelo lokusebenza, njengemiphumela, ayitholakali. Eminye imisebenzi efana nezihlungi ezihlakaniphile ayikatholakali, okuzophoqa ukuthi sisebenzise inguqulo yekhompyutha. Lokhu kukhawulelwa kubalulekile kepha kunguqulo ye-Photoshop ye-iPad, ngoba kwabanye abasebenzisi kungaba ithuluzi elisetshenziswa kakhulu futhi elinikeza ukusebenza okuhlukahlukene kakhulu.
Itholakala kuphela ngesiNgisi (okwamanje)
Uma usebenzisa njalo inguqulo ye-Photoshop yekhompyutha (i-PC noma iMac), uzosebenzisa inguqulo etholakala ngeSpanishi. Uhlobo lwe-iPad, okwamanje, Itholakala kuphela ngesiNgisi. Okungathi ngemibono kungaba ngumkhawulo, ekugcineni akunjalo, ngoba imisebenzi esinikeza yona imelwe ngezithonjana, zona lezo esingazithola kukhompyutha, ngakho-ke ngaphandle kokuthi awusebenzisanga lolu hlelo lokusebenza, ungabi nankinga yokuyithola ngokushesha.
Ibiza malini i-Photoshop ye-iPad?
I-Photoshop ye-iPad yokulanda i ngokuphelele free (ayihambisani ne-iPhone). Ukuze uthole okuningi kukho futhi usebenze ngakho, kubalulekile ukusebenzisa okubhaliselwe kwanyanga zonke okunenani lama-euro angu-10,99 ngenyanga. Uma ungaqiniseki ukuthi ngabe le nguqulo ye-iPad ikunikeza okudingayo, i-Adobe isivumela ukuthi sizame uhlelo lokusebenza mahhala nezinsuku ezingama-30.
Uma sihlola isicelo ezinsukwini ezingama-30 zokuqala, kufanele sikhumbule ukuthi kufanele zikhiphe ohlwini njalo ngenyanga (inqubo esingayenza kusuka kokubili i-iPhone ne-iPad) uma singahleleli ukuqhubeka nokusebenzisa uhlelo lokusebenza ngokuzayo, ngaphandle kwalokho sizokhokhiswa ama-euro ayi-10,99 ngenyanga ngokubhaliselwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » I-Photoshop ye-iPad isiyatholakala Yini le nguqulo isinikeza yona?
Ungayishintsha kanjani i-IP yami yomphakathi